Venezoela: Adihevitra Momba Ilay Rafi-pampianarana Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 18:23 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Português, বাংলা, Español, English
Niteraka adihevitra lehibe teo amin'ny firenena ny tolokevitra vaovaon'ny governemanta Venezoeliana momba ny rafi-pampianarana ho an'ny sekoly fanabeazana fototra. Raha milaza ny sasany fa mila amafisina ny soatoavina sosialy sy sosialista ary ny hevitra manohana ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny tetikasa teo aloha, ny sasany kosa milaza fa matahotra izy ireo fa mety fomba vaovao ahafahan'ny ankizy mianatra ny foto-pinoana ataon'ny governemanta ity rafitra vaovao ity raha ny tena marina.
Araka ny filazan'ny bilaogera sasany, maro amin'ireo tolokevitra no toa vazivazy. Ny hafa kosa milaza fa ireny mihitsy no zavatra ilain'ny rafi-pampianarana. Mipetraka ny adihevitra. Nisy vondron'adihevitra vaovao niforona, ary nahatonga ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny hihaino sy handray anjara amin'ny adihevitra izany. Manara-maso ny fanambarana avy amin'ny governemanta na avy amin'ny vondrona mpanohitra ny medià ; Misy ihany koa ny adihevitra momba ny fitsapa-kevi-bahoaka vaovao iray izay mety ho atao mahakasika io olana io. Ankoatra izany, manaraka ilay lohahevitra ary maneho ny heviny ny bilaogy.
Anisan'ny voateny ilay rafitra vaovao, izay mikendry ny hanala taranja sasany amin'ny fanatanjahan-tena. Manolotra lalao miendrika nentim-paharazana kokoa mifototra amin'ny firaisankina sy ny fitoviana izy ireo. Misy ihany koa ny adihevitra momba ny fianarana ny kolontsaina sy ny fomban-drazana nasionaly, satria ilay tetikasa vaovao toa manasongadina ny lova Afrikana sy ireo avy amin'ny “Aborigènes” mihoatra amin'ny Eoropeana. Ambonin'izay rehetra izay, aleon'izy ireo ny fianarana mafonja sy amin'ny antsipiriany momba ny governemanta sy ny idealin'i Chavez toa izay ny tantaran'izao tontolo izao sy ny tantaran'i Venezoeliana ankehitriny.
Vao naheno ny sasany tamin'ireo tolokevitra tamin'ny radio ilay bilaogera Talfin dia noraisiny ho vazivazy avy hatrany izany. Toa izao ny fanehoan-keviny rehefa nandinika kokoa izy:
Tolokevitra iray hafa koa ny hanafoanana ny “Honor Roll” satria miteraka fifaninanana izany. Tsy hitako izay tenenina. Inona no tanjona ampianarin'izy ireo amin'ny taranaka vaovao? Mba hitovy daholo? Nahoana izy ireo no tsy mandrisika ny fikatsahana ny tsara indrindra fa ny antonintoniny fotsiny? (…) Raha ny marina tsy hoe ny vahoakan'i Chavez akory no nahatonga ny toe-tsaina amin'ny antonintoniny fa tsy nanao na inona na inona izy ireo hanatsarana izany toe-draharaha izany, ny mifanohitra amin'izany ary no nataony.
Namoaka ny resaka nataony taminà manampahaizana momba ny fampianarana iray ny bilaogy Fotos de Chávez [es]:
Tsy mifototra amin'ny tokony hampitombona ny isan'ny sekoly na ny hanatsarana ny fahazoana rehefa mamaky na hisorohana ny tsy fahombiazan'ny ankizy any ampianarana ilay adihevitra, miresaka momba ny Bolivarisma, ny Marksisma isika … tsara izany, tsara ny miresaka ny zava-drehetra fa tsy resahana ny tena dikan'ny sekoly. Milaza i Herrera fa tsy hitranga ny tahotry ny ray aman-dreny sasany amin'ny mety hitodihan'ny fanabeazana any amin'ny ideolojia, ampahany iray manan-danja amin'ny fandaharam-baovao, satria tsy toy izany ny fandehan'izy io hoy izy araka ny zavatra efa niainany. Vokatry ny praxis kokoa ny fanabeazana noho ny lalàna hoy izy. “Misy fiantraikany amin'ny politikam-bahoaka ny hatsarana, fa tsy amin'ny lalàna”. “(Na ahoana na ahoana) misy ny tsy fahombiazan'ny foto-drafitrasa, ary mifanohitra amin'ny tiana atao rehetra ny toeran'ny mpampianatra socialy eo amin'ny fiarahamonina. Sady azo anampiana an'izay ny hoe amin'ny fifaneraserantsika no hibehazantsika mihoatra noho ny any an-tsekoly.”
Evony miteny hoe:
Mampiasa ho iray amin'ireo fototra hijoroany ny maha-zava-dehibe ny fianarana ilay programa vaovao, izay nantsoina hoe “pedagogic constructivism” (Foto-pisainana mandroso amin'ny fampianarana). Ity modely ity toa mampianatra ny mpianatra ny zavatra tena sarobidy aminy. Raha miresaka momba ny rafi-pampianarana Bolivariana ao amin'ny Fandarana Nasionalin'ny Bolivaria Momba ny Fianarana ho an'ny “fanabeazana ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena” isika, dia midika izany fa hiaro ny kolotsaintsika amin'ny maha-vahoaka antsika isika, fa hiaro ny kolotsaintsika amin'ny maha-vahoaka antsika isika, ny idealintsika amin'ny maha firenena antsika, ny idealin'ny filoha Chavez amin'ny maha mpitarika antsika sy taratry ny revolisiona Bolivariana na ny faritanintsika azy. Ary raha hiaro izany amin'ny hevitra na fitaovam-piadiana ny zanakay sy ny zandrinay, ilaina ny fanadihadiana sy fanazavana ny tsy mazava ao amin'ny fandaharan'asa Bolivariana, satria tsy tokony havelantsika hisintaka ny zanatsika.
Manohana ny tolokevitra vaovao i Vulcano avy amin'ny Noticias Bolivarianas [es] :
Manohana tanteraka an'ity fandaharam-pampianarana vaovao momba ny fampianarana Bolivariana izay voaresaka manerana ny firenena ity aho, satria hita fa tsy noho ny maha tsy manam-paharoa azy ihany no mampiavaka azy fa noho izy mametraka an'i Venezoela amin'ny toerana manan-danja amin'ny fironana mankany amin'ny vanim-potoana maoderina, miaraka amin'ny filozofia sy eritreritra izay nentin'ny vehivavy sy lehilahy teraka teto amin'ity tany ity miaraka amin'ny nofinofin'ny fananganana amin'ny alalanà karazana fiarahamonina hafa izay azo lazaina fa manana ny maha izy azy.
Azo jerena ato ilay fandahrana iray manontolo (amin'ny teny espaniola)